Khiyaano, Qashin, iyo Xadgudub - Caymiska Caafimaadka Maxalliga ah ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Xuquuqda Xubinta iyo Asturnaanta > Khiyaano, Qashin, iyo Xadgudub
Baro waxa ay tahay khiyaanada daryeelka caafimaad iyo sida loo sheego.
Ururka Daryeelka Caafimaadka Qaranka ee La Dagaalanka Musuqmaasuqa ayaa ku qiyaasaya in qasaaraha maaliyadeed ee ka dhashay khiyaanada daryeelka caafimaad ay ku saabsan tahay $ 100 milyan maalintii. Khiyaanada, qashinka, iyo xadgudubku waxay lacag ka qaataan barnaamijyada daryeelka caafimaadka waxayna adkeynayaan in la bixiyo daryeelka loo baahan yahay. Waxay sidoo kale kuxirantahay kordhinta kharashyada daryeelka.
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHPW), waxaan u heellan nahay joojinta khayaanada daryeelka caafimaadka, qashinka, iyo xadgudubka. Waa tan sida loo ogaado iyo sida aad u caawin karto.
Waa maxay khayaanada, qashinka, iyo xadgudubka?
Khayaanada ayaa timaadda marka qof si og oo ula kac ah u soo gudbiyo sheegasho been ah oo keenta lacag-bixinno aan habboonayn.
Biilasha adeegyada aan la bixin.
Been abuurka baaritaanka bukaanka si loo caddeeyo habraacyada aan loo baahnayn.
Oggolaanshaha dib-u-celinta ee gudbinta bukaanka.
Qashinku waa adeegsi xad dhaaf ah oo adeegyo ah ama dhaqanno kale oo, si toos ah ama si aan toos ahayn, u keenaya kharashyo caafimaad oo aan loo baahnayn. Guud ahaan looma tixgeliyo inay sabab u tahay ficillo dayacaad dambiyeed, laakiin ku takrifalka hantida.
Dalbashada tijaabooyinka ogaanshaha cudurka ee xad-dhaafka ah.
Si xad dhaaf ah booqashooyinka xafiiska.
Farmashiye u diraya daawooyinka xubnaha iyaga oo aan xaqiijin inay weli u baahan yihiin.
Xadgudubku waa ficil laga yaabo inuu ka dhasho kharash caafimaad oo aan loo baahnayn. Waa marka qof ama hay'ad ay been ka sheegaan xaqiiqooyinka si loo helo lacag bixin, laakiin aan ogaan iyo / ama ula kac loo samayn.
Lacag-bixin xad-dhaaf ah oo loogu talagalay adeegyada ama sahayda.
Bixinta adeegyo caafimaad oo aan loo baahnayn.
U aadida dhakhaatiir kala duwan ama qolalka xaaladaha degdega ah si loo helo dawada xanuunka.
Sidee CHPW ula dagaallanto khiyaanada
CHPW waxay u diyaarisay barnaamij tababar oo dhameystiran bixiyeyaashayada, kaas oo ay marin u heli karaan si ay u bartaan sida looga hortago, loo ogaado, loona soo sheego khayaanada.
Waxaan sidoo kale bixinnaa qalab fudud oo khadka tooska ah ah oo xubnaheenna uga warbixin karaan khayaanada, qashinka, ama xadgudubka suurtagalka ah.
Ka ilaalinta naftaada khayaanada, qashinka, iyo xadgudubka
Raac tilmaamahan fudud ee kaa caawinaya joojinta khayaanada:
Sii kaarkaaga Aqoonsiga Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington ama nambarka aqoonsiga kaliya a daryeel caafimaad, rug caafimaad, ama isbitaal.
Sii aqoonsigaaga oo keliya markaad daryeel helayso.
Weligaa qofna yuusan u deyn kaarkaaga Aqoonsiga Caafimaadka ee Beesha ee Washington.
Weligaa ha saxeexin a foomka caymiska maran.
Had iyo jeer diyaar u noqo inaad muujiso Aqoonsiga sawirka markaad hubinaysid ballanta caafimaadka.
Ka taxaddar bixinta waxaaga Lambarka Amniga Bulshada.
Haddii aad wali su'aalo ka qabtid khayaanada daryeelka caafimaadka, fiiri ilaha hoose:
Maamulka Daryeelka Caafimaadka - Kahortagga Khiyaanada Medicaid
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Taariikhda: Febraayo 22, 2022